MuRussia, chitima chekumhanyisa chakarova munhu aisaziva kuti chitima chaive chasvika padanho rekuyambuka. Nguva idzodzo dzaityisa dzakaonekwa kunge anbean ... Russia's St. Pakuyambuka kweiyo nhanho padyo nechitoro chechitima cheServvyanka muSt [More ...]
Mapepanhau mazhinji muBolu anopa misoro; "Mutungamiriri akapa rairo ku Ministry of Transport" Balloon akaoneka. Mumusangano wakarongwa neBolu Donors Foundation nguva pfupi yadarika, ruzivo rwakapihwa kunhengo dzedare renheyo nezvechitima chekumhanya zvakanyanya. [More ...]
İntek Kalıp ve İskele ndiye akazogadzirisa shamwari yeDarussalam - Morogoro neRwizi - Dodoma - Makutupora Railway Railway kuTanzania, yekutanga yakakwira yechitima muEast Africa. Dar es Salaam kuve guta rechiteshi [More ...]
Kambani yeChitima Railways, iyo inoita zvikamu zviviri muzvitatu zveakakwira zvekumhanya kwazvo mumakore gumi apfuura munyika, iri kusangana neBritain. Iyo kambani ndiyo yakakura kwazvo pasi rose pamakiromita 10 [More ...]
Mubairidzi akaferefeta kuti kana kwete bhandi repachigaro rinogona kushandiswa pazvitima zvekumhanya zvakanyanya pakukumbira kwemugari. Mumushumo wakagadzirirwa, "Mune tsaona inoitika kumhanya yakanyanya senge 255 km neawa, mhedzisiro yebhandi yechigaro. [More ...]
Nemhinduro dzakareruka, tinogona kumutsa hofori dzekurara neimwe mari diki uye kusimudzira mari dzisina basa. Nepamari diki, tinokwanisa kuwedzera matanho ekuvandudza kumatunhu edu ehupfumi kumashure. Kune mukana wakadai muguta medu.70-80 ndege dzinogona kugara [More ...]
High Speed ​​Train Çerkezköy Shanduko Yenyonganiso Yekuongorora Musangano Wakagadziriswa
ÇerkezköyMusangano wekuongorora wakaitwa pasi pemubvumirano weMayor Vahap Akay kuitira kuti vatarise matambudziko ekufambisa angangoitika muguta medu uye kugadzirisa matambudziko aya neImhare Yekutyaira Yechinzvimbo ichipfuura. matunhu [More ...]
Sivas YHT uye Demirağ havazove vanopinda neOIZ, asi ichava dunhu rinowana miganho
Sivas Meya Hilmi Bilgin akasangana nevakuru vavakidzani pamusangano wekutaurirana. Mumusangano wakaitirwa paHoterm Seermik Sefa Hotel, kunze kweMutungamiri Bilgin, Vatsigiri venzvimbo, Musoro weMuhtars Association, Cemalettin Arslan. [More ...]
TCDD yechando uye zvikwata zvinodziya echando zviri kuita zvakanyanya kuedza kuti zvitima hazvivhiringidzwe nekuda kwekutonhora kwechando uye chando chirimo chinoshanda muEast Anatolia Dunhu. Republic of Turkey [More ...]
Istanbul Ankara YHT Mutsetse Vangani Km Pamusoro North Anatolian Fault Line
Musi waJanuary 24, 2020 pashure kwenyika nebasa mhirizhonga muna Elazig 6,7 zviri sei nyore voruzhinji pamusoro kwenyika Turkey uye vakatanga kukurukura chii matanho akatorwa kuti. Sezvineiwo paruzhinji, panzvimbo yepamatongerwo enyika [More ...]
Mutungamiri Johnson Johnson Kutsigira 100 Bhiriyoni Pound Yakakwira Yekumhanya Chitima Project
Mutungamiri weBritain, Boris Johnson, ari kugadzirira kutsigira chirongwa chekumhanya zvakanyanya chinobatanidza London kuchamhembe kweEngland. Mutsara mutsva uchave weBritish neEurope yakakura kwazvo kuvaka dzimba. [More ...]
Hurumende yakadzivirira hukakwira kumitengo yekunyoresa High Speed ​​(YHT) nemashoko anoti "kusarongeka kwagadziriswa". Kuongorora hunyanzvi hukuru pamatiketi eYYT kunyoreswa, CHP Eskişehir Mutevedzeri waUkuku Çakırözer akati, [More ...]
Ambassadors veEU Vawana Anatolia Ine Vafambi vekuExpress Eastern Express
Musoro EU nhume Turkey Berger, Ankara nhume pakati dzeEU uye vavo, uyo akawana Anatolia Eastern Express Tourist naka chokufambisa. The European Union (EU) -Turkey chokufambisa kwemauto sangano rakaronga pasi pamwe EU [More ...]